I-angle yombane yentsimbi ye-Angle tower yentsimbi yikholamu yeplate ene-downcomer. Indawo yokubhabha yenziwe ngentsimbi ye-engile ngokuhambelana kunye, kwaye ulungelelwaniso lwendlela yentsimbi ye-engile iyahambelana nolwalathiso lokuhamba kolwelo. Umda obukhali wentsimbi ye-engile ikwindawo esezantsi, kwaye icandelo lomnqamlezo likwimo ye "V". Kukho umsantsa othile phakathi kwee-steels ezimbini ezikufutshane. I-downcomer iyafana netreyi eqhelekileyo. Ulwelo kwi eliphezulu pl ...
Inqaba yentsimbi ye-Angle yikholamu yeplate enezantsi. Indawo yokubhabha yenziwe ngentsimbi ye-engile ngokuhambelana kunye, kwaye ulungelelwaniso lwendlela yentsimbi ye-engile iyahambelana nolwalathiso lokuhamba kolwelo. Umphetho obukhali wentsimbi ye-engile ikwindawo esezantsi, kwaye icandelo lomnqamlezo likwimo ye "V". Kukho umsantsa othile phakathi kwee-steels ezimbini ezikufutshane. I-downcomer iyafana netreyi eqhelekileyo. Ulwelo olukwipleyiti ephezulu lungena kwi "V" engile ngentsimbi ngokudiliza, lo gama igesi iqhuma kunye nolwelo xa inyuka ngesikhewu segridi, kwaye imeko yokuhamba kwegesi-kulwelo kwitreyi iyafana naleyo kwisisefu isitya. Iziphumo zibonisa ukuba ukwehla koxinzelelo kwitreyi yentsimbi ye-engile incinci, amandla okutshintshiselana ngegesi makhulu, ukusebenza kwetreyi kulungile, ulwakhiwo lulula, ukuqhubekeka nokwenza imveliso kulungele, kwaye ukuqina kulungile. Nangona kunjalo, ukusebenza kwinqaba yeplate ye-sieve ayilunganga njengaleyo yenqaba yeplate yenqaba xa amandla onyango incinci. Inqaba yentsimbi ye-engile isetyenziswa ngokubanzi ebaleni, kunye nepali yentsimbi yombhobho kunye nentsimbi yombhobho wesinyithi esincinci isetyenziswa ngokubanzi kwindawo yasezidolophini kuba umgangatho womgangatho mncinci kune-engile yentsimbi.
I-engile yombane inqaba yentsimbi Inqaba yentsimbi yombane luhlobo lwesakhiwo sentsimbi esinokugcina umgama okhuselekileyo phakathi kwabaqhubi abaxhasayo kunye nezakhiwo zomhlaba kumgca wokuhambisa. Kwiminyaka yakutshanje, ngokukhula okukhawulezayo koqoqosho lwesizwe, ishishini lamandla likhule ngokukhawuleza, eliye lakhuthaza ukukhula ngokukhawuleza komzi mveliso wokuhambisa inqaba. Ngokwezibalo, ukungeniswa kwentengiso yeshishini lokuhambisa inqanaba ...
Umbane weNsimbi yeNqaba yombane, I-Angle yentsimbi yokuThutha amandla eNqaba, Ulwakhiwo Tube Steel, Ulwakhiwo lweZakhiwo zentsimbi, Inqaba kaMasipala yoNxibelelwano, Umbane we-Angle Steel Towers,